स्वास्थ्य पेज » वीर्य खाँदा गर्भ रहन्छ ? वीर्य खाँदा गर्भ रहन्छ ? – स्वास्थ्य पेज
वीर्य खाँदा गर्भ रहन्छ ?
वीर्य निलेको भरमा गर्भ त रहँदैन, तर मुखमैथुनका पारखीले गुदद्वार मैथुन र योनि मैथुन पनि गर्ने हुँदा यी सबै मैथुन एकै सेटिङमा हुन गएको खण्डमा गर्भ रहन गयो भने भ्रम पैदा हुन सक्छ। वीर्य पनि अन्य खाद्यवस्तु जस्तै हो।
यदि वीर्य पिएको वा निलेको खण्डमा घाँटी, खाद्य नली हुँदै पेट (आमाशय) मा पुग्दा त्यहाँ रहेको अम्लले यसलाई पनि पचाउने हुनाले निलेको वीर्यका कारण गर्भ रहने सम्भावनै हुँदैन। तर, पुरुष पार्टनर कतिपय यौनरोगबाट संक्रमित छ भने निलेको वीर्यमा रहेको धातुमेहका कीटाणु तथा क्लेमिडियाका कारण घाँटीको संक्रमण हुनसक्छ।
यसका साथै यदि महिला पार्टनरको मुखमा आलो घाउ छ भने एचआईभी सर्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ।